कालो ढुसीका कारण संक्रमितको आँखाको दृष्टि गुम्न सक्ने - चौतारी पोष्ट अनलाइन
कालो ढुसीका कारण संक्रमितको आँखाको दृष्टि गुम्न सक्ने
काठमाडौं ,जेठ २०, २०७८
तपाईं कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ वा संक्रमणपछि निको हुनुभएको छ ? सावधान, तपाईंको आँखामा कालो ढुसीको संक्रमण हुन सक्छ । यस्तो भएमा आँखाको दृष्टिसमेत गुम्न सक्छ ।
केही समयदेखि भारतको विभिन्न प्रान्तमा फैलिरहेको कालो ढुसी दुई सातादेखि नेपालमा पनि देखिएको छ । कोरोना संक्रमित या संक्रमण भइसकेको व्यक्तिमा देखिने कालो ढुसीका कारण कतिपयले आँखाको दृष्टिसमेत गुमेको चिकित्सकले औंल्याएका छन् ।
के हो कालो ढुसी ?
फलफूल तथा तरकारी कुहेको फोहोर र प्रदूषित वातावरणमा कालो ढुसी पाइन्छ । यो ढुसी छोएको हात सफा नगरी नाक छोएमा सोही माध्यमबाट शरीरका अन्य भागमा पुग्छ । चिकित्सकका अनुसार सुरुमा नाक, त्यसपछि नाकको हड्डी छेडेर आँखाबाट ब्रेन (मष्तिक)मा समेत कालो ढुसीको संक्रमण हुन्छ । नागरिक दैनिकमा छ ।
Prevओलीको सन्देश आफ्नो समूहलाई ‘फुटाउने र राज गर्ने’ नीति भएको नेपालको भनाई
Nextडेढ अर्बभन्दा बढीको धानको बीउ आयात